Home » Business & Economics » မြေပဲယိုလေးတကိုက်နှစ်ကိုက် (၈) – Cost-Cutting ချွေတာတယ်ဆိုတာ ရှက်စရာလား
Posted by padonmar on Jun 13, 2016 in Business & Economics, Creative Writing, Environment, Money & Finance, My Dear Diary, Society & Lifestyle, Travel | 13 comments
Cut Cost Taiwan
Innisfree ဆိုတဲ့ ကိုရီးယားဆိုင်မှာဆို ပစ္စည်းဝယ်ပြီး အိတ်ယူမလား မေးတယ်။
ရှက်ဘူး shark bull
ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာ.. သောက်ရေသန့်ဗူးအပါအ၀င်.. အချိုရည်ဗူး၊ ဘီယာဘီ၊ပုလင်းစတာတွေမှာ.. စာကလေးကပ်ထားပေးတယ်..။
Beverage Container Recycling Home Page – CalRecycle
တစ်ခါသုံး သောက်ရေခွက်ကို စက္ကူ လေးနဲ့ လုပ်ထားကို သဘောကျချက်…
ဒီမှာလည်း အဲ့ဒါမျိုး လုပ်ရင် ကောင်းမယ်။
.ကျနော်တော့ အဆောင်မှာ နေတာ.. လူပေါင်းစုံ စုနေရတော့…တော်တော်များများဟာ စွမ်းအင် ချွေတာရ ကောင်းမှန်းလည်း မသိကြ…ရေ ချွေတာရကောင်းမှန်းလည်း မသိကြ…
ကမ္ဘာကြီးရဲ့ ဘယ်ထောင့် ဘယ်နေရာကိုမှ ချွေတာ ပေးရကောင်းမှန်း၊ ကယ်တင် ထိန်းသိမ်းပေးရကောင်းမှန်း မသိကြတဲ့ လူငယ် လူရွယ်တွေ တပုံကြီးကို နေ့စဉ် မြင်နေရတာ….
သွားတိုက်ဖို့လုပ်ရင်… ဘေစင်က ရေပိုက်ခေါင်းကို ဖွင့်ချလိုက်တယ်။
ကျနော့်မှာဖြင့် ဘေးကနေ မြင်နေရရင်..နှမြောလိုက်တာ…။
မီးတွေဆိုလည်း..မလိုအပ်ပဲ…အိမ်သာထဲလည်း ထိန်နေအောင် ဖွင့်ထားတာ။
အိမ်သာထဲက ပြန်ထွက်တဲ့အခါ…အပြင်ဘက်ကနေ မီးခလုပ်ကို ပိတ်ခဲ့ရုံနဲ့ စွမ်းအင်ကို ချွေတာတဲ့သူ ဖြစ်သွားမှာကို မတွေးကြ။
ဒါမယ့်…ကိုယ် လုပ်သလို…ရေတွေ မီးတွေ ချွေတာတာကို…လိုက် ချွေတာတဲ့ ချာတိတ် တစ်ယောက်နှစ်ယောက်တော့ ရှိတာ အမြတ်။
သူတို့ရဲ့ စိတ်ဓါတ်အဆင့်အတန်းကိုက…အစကတည်းက မနိမ့်ကျခဲ့လို့…လို့… မြင်နေမိတယ်။
ဟိုးအရင်မြန်မာက လူကြီးတွေက ကိုယ်တွေ ပိုချွေတာ ပိုစည်းကမ်းရှိကြသလားလို့နော်။ ကျွတ်ကျွတ်အိတ်ဆိုလည်း သုံးပြီးသားလေးတွေ လှမ်းပြီး အခြောက်ခံ ပြန်ခေါက်သိမ်းထားတယ်။ ထမင်းတွေ ပိုရင် ထမင်းခြောက်လှမ်းထား ဘူးထဲထည့်ထားတယ်။ သံပုရာသီး နည်းနည်းပုပ်တာလေးတွေ သန့်စင်ပြီး ဆားစိမ်ကြတယ်။ နောက်အရင်တုန်းက ကျွတ်ကျွတ်အိတ်သိပ်မသုံး သတင်းစားစက္ကူရယ် အင်ဖတ်တွေ သုံးတယ်။ အဲ့ဒါတွေကအစ။
အဲဒီတုံးက.. သယံဇာတတွေထုတ်မရောင်းသေးတော့.. ပိုမွဲတယ်လေ…။
နိုင်ငံခြားက.. တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်းလေးတအုပ်ရရင်ပဲ… စာအုပ်အဖုံးလုပ်ရ.. အမြတ်တနိုးနံရံမှာကပ်ရလည်း ဖြစ်ခဲ့လောက်အောင် ပစ္စည်းရှား/မွဲခဲ့တာကိုး…။
အခုက.. သယံဇာတ..မြေပေါ်မြေအောက်အကုန်ထုတ်ရောင်းနေတော့.. နည်းနည်းလုပ်အား.. ပြောအားရှိလာသပေါ့..။
ရန်ကုန်ရောက်တုံး.. ဆိပ်ကမ်းအ၀င်အထွက်တွေလေ့လာကြည့်နိုင်ခဲ့တာ… ရင်ထဲနင့်နေတာပဲ..။
ကြုံတုန်း အာတီဒုံ ကြီးနောက်ဦးမှ။ အမြတ်ခွန်ရုံးရှေ့မှာ နေတဲ့လူဆိုတော့ နည်းနည်းပါးပါးတော့ သိတာပေါ့။ အိမ်တစ်လုံးရောင်းရင် အမြတ်ခွန်သွင်းရတယ်။ ၁၅သိန်း သွင်းရမှာကို နားလည်မှုနဲ့ ၇သိန်းပဲ သွင်းလို့ ရတယ်။ အဲဒါ ချွေတာရေးလား ဟိဟိ။
အမေရိကားကျ.. အခွန်ဆောင်ပြီးငွေဖြူဖြစ်နေဖို့ ပိုအရေးကြီးသမို့.. အခွန်ဆောင်ဖို့ငွေပေးတာကို ပိုထက်သန်ကြတယ်..။
အိမ်မှာဆို ကိုယ်က ကျွတ်ကျွတ်အိတ်လေးကို ရေဆေးပြီး ချိတ်ထားရင် ရေတစ်စက်စက်ကျနေတာ ရှုပ်တယ်ဆိုပြီး အမှိုက်ပုံးထဲ ထည့်ပစ်တယ် . . Change ဆိုတာ လုပ်ဖို့ဆိုရင် ပါဝါရှိဖို့လိုတယ်လို့ ထင်မိတယ် . . . လောလောဆယ်တော့ recycle paper bead jewelery တွေလုပ်ဖို့ အားသန်နေတယ် . n .
ခိုနီဒုံဂျီးကို မစန့်ကျင်ကြ…
ချွေတာကြတဲ့နေ့လို့မရေးပဲ.. သိတဲ့နေ့လို့ရေးသမို့.. ကျေးဇူးတင်..။
မနက်ဖြန်.. သို့မဟုတ်.. ဘယ်သောအခါ..။